DeOxyRibose စျေး - အွန်လိုင်း XNA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို DeOxyRibose (XNA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ DeOxyRibose (XNA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ DeOxyRibose ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XNA – DeOxyRibose
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ DeOxyRibose တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
DeOxyRibose များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DeOxyRiboseXNA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0286DeOxyRiboseXNA သို့ ယူရိုEUR€0.0243DeOxyRiboseXNA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0219DeOxyRiboseXNA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0262DeOxyRiboseXNA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.26DeOxyRiboseXNA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.181DeOxyRiboseXNA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.635DeOxyRiboseXNA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.107DeOxyRiboseXNA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0382DeOxyRiboseXNA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.04DeOxyRiboseXNA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.65DeOxyRiboseXNA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.221DeOxyRiboseXNA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.152DeOxyRiboseXNA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.14DeOxyRiboseXNA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.77DeOxyRiboseXNA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0393DeOxyRiboseXNA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0432DeOxyRiboseXNA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.887DeOxyRiboseXNA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.199DeOxyRiboseXNA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.03DeOxyRiboseXNA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩34.13DeOxyRiboseXNA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10.84DeOxyRiboseXNA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.1DeOxyRiboseXNA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.794
DeOxyRiboseXNA သို့ BitcoinBTC0.000003 DeOxyRiboseXNA သို့ EthereumETH0.00007 DeOxyRiboseXNA သို့ LitecoinLTC0.000499 DeOxyRiboseXNA သို့ DigitalCashDASH0.000332 DeOxyRiboseXNA သို့ MoneroXMR0.00033 DeOxyRiboseXNA သို့ NxtNXT2.37 DeOxyRiboseXNA သို့ Ethereum ClassicETC0.00403 DeOxyRiboseXNA သို့ DogecoinDOGE8.54 DeOxyRiboseXNA သို့ ZCashZEC0.000348 DeOxyRiboseXNA သို့ BitsharesBTS1.1 DeOxyRiboseXNA သို့ DigiByteDGB1.1 DeOxyRiboseXNA သို့ RippleXRP0.0958 DeOxyRiboseXNA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00102 DeOxyRiboseXNA သို့ PeerCoinPPC0.103 DeOxyRiboseXNA သို့ CraigsCoinCRAIG13.49 DeOxyRiboseXNA သို့ BitstakeXBS1.26 DeOxyRiboseXNA သို့ PayCoinXPY0.517 DeOxyRiboseXNA သို့ ProsperCoinPRC3.71 DeOxyRiboseXNA သို့ YbCoinYBC0.00002 DeOxyRiboseXNA သို့ DarkKushDANK9.5 DeOxyRiboseXNA သို့ GiveCoinGIVE64.1 DeOxyRiboseXNA သို့ KoboCoinKOBO6.75 DeOxyRiboseXNA သို့ DarkTokenDT0.0263 DeOxyRiboseXNA သို့ CETUS CoinCETI85.47
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 16:50:01 +0000.